Marvel na-aga ikpughe ọtụtụ ụbọchị mwepụta maka ngosipụta ọhụrụ MCU Na-egosi 4 - BGR - TELES RELAY
Marvel na-aga ikpughe ọtụtụ ụbọchị mwepụta maka ngosipụta ọhụrụ MCU Phase 4 - BGR
Marvel na-achọ ibido akụkụ nke anọ nke nnukwu Marine Cinematic Universe ya, nke ga-ebuwanye ibu karịa nke ọ bụla gara aga mgbe ọ ruru oke ọdịnaya. Na mgbakwunye na ihe nkiri isii nke nwegoro ụbọchị izizi na aha ndị gọọmentị, anyị na-enwetakwa usoro ihe nkiri asatọ nke TV nke a ga-ewepụta na Disney + n'ime afọ abụọ na-esote. Ihe ngosi ndị a ga-abụ akụkụ dị mkpa nke akụkọ gbasara MCU n'ọdịniihu, a ga-ejikọkwa ya na fim ahụ. Ha ga-ewetakwa ụfọdụ n'ime ndị dike anyị kachasị amasị, ndị otu ndị na-eme ihe nkiri na-akọwa.
Ọtụtụ ihe nkiri Marvel TV ọhụrụ na-abịanụ amalitelarị na mmepụta, anyị ahụwokwa ọtụtụ leaks na-akọwa ihe ndị bụ isi akụkọ. N'oge Super Bowl nke ọnwa gara aga, Disney wepụtara ọbụna obere mkpirisi juputara na ndị na-emebi ihe maka usoro atọ mbụ, gụnyere Falcon na onye agha oyi, WandaVisionna Loki, mbụ n'ime abụọ a ga-ewepụta n’afọ a. Agbanyeghị, ọ bụghị Disney na Marvel kwuputara ụbọchị mwepụta kwụsịrị maka usoro MCU TV ndị a ma ọ bụ usoro ọ bụla ọzọ anyị maara na ụlọ ọrụ ndị ahụ na-etolite. Nke a ga-abụ nke ezigbo n’oge na-adịghị anya, dịka ụfọdụ akụkọ si kwuo, ka Disney nwere ike inye ụbọchị mmalite mmalite maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị MCU na-abịa.
Disney ga-eme ihe omume mgbasa ozi pụrụ iche na London na Machị 5 maka atụmanya banyere mgbasawanye nke Disney +, akụkọ sitere n'aka Murphys Multi Multi et Akụkọ banyere Star Wars.
Ọrụ gụgharia dị naanị na Netherlands, nke bụ otu n'ime ahịa ule Disney maka Disney +. Nke ahụ kwuru, ọ ga-ebido n'ọtụtụ ahịa ndị ọzọ na Machị 24. Akụkọ ndị a na-egosi na a na-atụ anya na ndị isi Disney ga-abịa emume mgbasa ozi pụrụiche, ha ga-ekpughere nkọwa ndị ọzọ gbasara nke na-esote Star Wars na ihe ịtụnanya nke Marvel ga-erute Disney + n’oge 2020 na 2021.
Dị ka ihe ncheta, lee ihe usoro oge nke usoro nke 4 nke MCU dị:
Nwanyi di oji - Mee 1, 2020
Falcon na onye agha oyi - Ọgọst 2020
WandaVision - Ọda 2020
Ebighebi - Nọvemba 6, 2020
Shang-Chi na akụkọ banyere mgbaaka iri ahụ - Machị 12, 2021
Loki - Oge opupu ihe ubi 2021
Iche dọkịta na-eju anya na ara - Mee 7, 2021
Ududo-Man 3 - Julaị 16, 2021
Na ihe ga - eme ma ọ bụrụ na… - ọkọchị 2021
Anya anya - Ọda 2021
Oriakụ Marvel - Ọda 2021
Thor: andhụnanya na égbè eluigwe - Nọvemba 5, 2021
Onye na-atụ egwu nke ọnwa - Kpebisie ike
She-Hulk - Kpebisie ike
Naanị fim egosiputara ụbọchị ewepụtara, Disney ekwuola nke ahụ Falcon na onye agha oyi ga-edowe ya n’August. Ihe ndi ozo bu ihe omimi, anyi achoro na Disney na Marvel kerita ihe ndi ozo banyere oru a n’oge na adighi anya.
Nke ahụ kwuru, ọ bụghị ihe doro anya ma ọ bụrụ na Marvel na-ezube ịkọwapụta atụmatụ maka Usoro Ọhụụ nke MCU 5 n'oge na-adịghị anya. Anyị maara na Disney ewepụtala ụbọchị mmalite asatọ maka 2022 na 2023. A ga-ahapụ fim anọ n'otu afọ, otu n'ime ha kwenyesiri ike na ha. Nwa panther 2. Mana anyị amataghị ihe ihe onyonyo TV nwere ike ịtụ anya na usoro 5, ma ọ bụ na usoro ọ bụla na usoro 4 ga-emegharị ọzọ maka oge ọzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ha bụ naanị usoro dị oke.
Isi iyi nke onyonyo: Chelsea Lauren / iche iche / Shutterstock
Chris Smith malitere ide banyere ihe akụrụngwa dịka ihe ntụrụndụ, na tupu ịmara nke a, ọ na-eso ndị na - agụ akwụkwọ gburugburu ụwa kerịta echiche ya na teknụzụ. Mgbe obula odighi ede ihe banyere ngwa, o ghaghi aghaghi ila ha, n’agbanyeghi na o na acho isi ike. Ma ọ bụchaghị ihe ọjọọ.
Ndị Katọlik na United States: Willnye Ka Ha Ga-Ahọrọ Etu maka Onye isi Ala?
Egypt na Belarus bịanyere aka na nkwekọrịta iri na abụọ iji kwalite azụmahịa na imekọ ihe ọnụ